International Baccalaureate - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Barnaamijka Sanadaha Dhexe ee Shanta sano ah (IB MYP) ee ardayda fasalka 6aad ilaa 10aad, wuxuu bixiyaa hanaan waxbarasho oo soo dhaweynaya hadana ka gudbaya maadooyinka dugsiga dhaqameed. IB MYP waxaa laga bixiyaa Dugsiga Dhexe ee Robbinsdale iyo Dugsiga Sare ee Cooper. Ujeeddada dhammaan barnaamijyada IB waa in la horumariyo dadka maskaxda ku haya adduunka, kuwaas oo, aqoonsanaya dadnimadooda guud iyo wadaagga ilaalinta meeraha, gacan ka geysanaya abuuritaanka adduun ka wanaagsan oo ka nabdoon. Maadaama aan nahay IB Learners waxaan isku dayeynaa inaan noqono: Weydiyayaal, Aqoon, Mufakir, Isgaarsiin, Mabda ', Maskax Furan, Daryeelid, Khatarayaasha, Dheelitir iyo Milicsiga Ardayda dhigata MYP waxay bartaan dhamaan qeybaha kala duwan ee cilmiga, oo ay kujiraan Luqadda iyo Suugaanta, Shaqsiyaadka iyo Bulshooyinka. , Sayniska, Xisaabta, Farshaxanka-Muuqaalka iyo Waxqabadka, Naqshadeynta, iyo Barashada Jirka iyo Caafimaadka. MYP waxay dooneysaa inay ka caawiso ardayda inay xiriir la yeeshaan anshaxa si ay u siiyaan aragti ballaaran, waxayna ku dhiirigelinayaan inay si firfircoon uga qaybqaataan bulshadooda.
MYP waxay baraan aalado loogu talagalay barashada nolosha oo dhan waxayna kobciyaan dabeecado masuuliyadeed oo ka caawiya ardayda inay ogaadaan sida loo adeegsado waxa ay barteen si loogu qaado tallaabo mabda 'leh. MYP waxay diiradda saareysaa barashada madaxa banaan waxay kadhigeysaa u diyaargarowga ugu haboon ee Barnaamijka Dibloomada IB (DP) ee ardayda fasalada 11aad iyo 12aad ee Dugsiga Sare ee Cooper.
MYP waxaa lagu gartaa:
Heerarka / filashooyinka waxbarasho ee ugu sarreeya
Tayeyn tababar macalimiin heer qaran iyo heer caalami ah
Diirada saar ilmaha oo dhan
Aragtida guud ee aqoonta
Xiriirinta iyo horumarinta xirfadaha waxbarashada
La wareegida luuqada labaad
Wacyiga dhaqamada iyo xasaasiyadda
Wacyigelinta bulshada iyo kaqeybgalka adeeg
Sumcad iyo aqoonsi nidaamyada iskuulada adduunka iyo jaaliyadaha
MYP, ardaydu waxay wax ku bartaan sideed kooxood oo maado ah, uguyaraanna 50 saacadood oo waxbarid koox kasta oo maado ah sanad kasta. Waxyaabaha lagu garto MYP waxaa ka mid ah:
Fikradaha muhiimka ah iyo kuwa la xiriira waa fikradaha waaweyn, ee aasaaska u ah barista iyo barashada MYP. Waxay hubiyaan ballac iyo qoto dheer ee manhajka waxayna kobciyaan barashada gudaha iyo guud ahaan anshax dhaqameedka.
Xaaladaha caalamiga ah waxay bixiyaan bar bilow ah oo la wadaago si wax looga weydiiyo waxa loola jeedo in laga fikiro fikirka caalamiga ah, iyadoo la dejinayo manhaj kor u qaadaya luuqadaha badan, fahamka dhaqamada iyo ka qeyb qaadashada caalamka.
Qaababka barista iyo barashada, oo ah dun mideysa dhammaan kooxaha maaddooyinka MYP, waa xirfado ka caawiya ardayda inay maareeyaan barashadooda. Waxay bixiyaan aasaas u ah guusha waxbarashada sii socota iyo adduunka ka baxsan fasalka.
Waxqabadka iyo adeegga, waxyaabaha lagama maarmaanka u ah MYP, waxay dejiyeen natiijooyin waxbarasho oo cad oo ka koraya ka-qaybgalka ardayda ee bulshada maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah. Mashruucyada MYP waxaa wargaliya moodeellada la ixtiraamo ee barashada adeegga waxayna bixiyaan dhagaxyo loo maro barnaamijyada Dibloomada ee aasaasiga u ah shuruudaha Hal-abuurka, Waxqabadka iyo Adeegga (CAS).
Mashruuca shakhsi ahaaneed, ee loogu talagalay ardayda dhammaynaysa barnaamijka sannadka 5, waa waayo-aragnimo dhammaystiran oo ay ardaydu ku dabaqaan hababkooda xirfadaha barashada si ay u dhammaystiraan shaqo dheeraad ah oo is-hagitaan ah. Qeybtaan loo baahan yahay waxay siisaa fursado hal-abuurnimo iyo runti shaqsiyadeed oo muujinaya barashada.